Naya Drishti | यामाहा एफजेडएस भी ३ र टीभीएस आरटिआर अपाचे १६० फोर भी मध्ये कुन राम्रो ? - Naya Drishti यामाहा एफजेडएस भी ३ र टीभीएस आरटिआर अपाचे १६० फोर भी मध्ये कुन राम्रो ? - Naya Drishti
यामाहा एफजेडएस भी ३ र टीभीएस आरटिआर अपाचे १६० फोर भी मध्ये कुन राम्रो ?
पौष ०५, काठमाडौं । यामाहाको नेपालमा सर्वाधिक बिक्री गर्दै आएको एफजेडएस भी ३ र टीभीएसको १६० फोर भी दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी मोटरसाइकल हुन् । १५० सीसी सेग्मेन्टमा सर्वाधिक बिक्री हुने मोटरसाइकल बजाज पल्सर १५० पछि यी दुई मोटरसाइकल हुन् ।
धेरै फिचर समान रहेका यी दुई मोटरसाइकल बीच कडा टक्कर रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा टीभीएसले आरटीआर १६० फोर भीको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेसँगै प्रतिस्पर्धा थप प्रतिस्पर्धी भएको हो ।
टीभीएसले एबीएस र स्मार्ट कनेक्ट फिचर थप गरेर ल्याएको नयाँ भेरियन्ट अहिले थप चर्चामा रहेको छ । यस्तोमा एफजेडएस भी ३ र आरटीआर १६० फोर भीमा रहेका भिन्नता यस प्रकार रहेका छन् ।
यामाहा एफजेडएस भी ३ मा १४९ सीसी सिंगल सिलिन्डर, एयर कुल्ड, एफआई इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ७२५० आरपीएममा १२.२ बीएच पावर तथा ५५०० आरपीएममा १३.६ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यो मोटरसाइकलमा ५ स्पीडको गियर बक्स जडान गरिएको छ ।
टीभीएस अपाचे आरटीआर १६० फोर भीमा १५९.७ सीसी सिंगल सिलिन्डर, आयल कुल्ड कार्वुरेटर इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले १६ बीएच पावर तथा १४ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यो मोटरसाइकलमा ५ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ ।
यामाहा एफजेडएस भी ३ मा १२.८ लिटर इन्धन क्षमताको ट्याङ्की दिइएको छ । त्यसैगरि आरटीआर १६० फोर भीमा १२ लिटर इन्धन अट्ने ट्याङ्की रहेको छ ।
माइलेजको कुरागर्दा एफजेडएस भी ३ ले ४५ किलोमिटर र आरटीआर १६० फोर भीले ३५ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने कम्पनीको दावी रहेको छ ।
यी दुबै मोटरसाइकलमा डबल डिस्क रहेको छ । टीभीएस आरटीआर १६० फोर भीको फ्रन्टमा २७० एमएम र रियरमा २०० एमएमको डिस्क ब्रेक रहेको छ । यामाहाले फ्रन्टमा २८२ एमएम र रियरमा २२० एमएमको डिस्क ब्रेक दिएको छ । यी दुबै मोटरसाइकलमा सिंगल च्यानल एबीएस सिस्टम उपलब्ध रहेको छ ।
यी दुबै मोटरसाइकलको फ्रन्टमा टेलीस्कोपिक सस्पेन्सन र यामाहाको रियरमा ७ स्टेप एड्जस्टेवल मोनोक्रस र टीभीएसमा मोनोसक्स सस्पेन्सन रहेको छ । यी दुबै मोटरसाइकलमा १७ इन्च अलोय ह्वील प्रयोग गरिएको छ ।
टीभीएस आरटीआर १६० फोर भी एबीएस भर्सनको मूल्य ३ लाख ५ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै यामाहा एफजेडएस भी ३ को मूल्य ३ लाख २३ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
यी दुबै मोटरसाइकलमा फुल्ली डिजिटल कन्सोल रहेको छ । आरटीआर १६० फोर भीमा स्मार्ट कनेक्ट फिचर रहेको छ । यामाहाले एफआई इन्जिन दिदा टीभीएसले काब्र्रुरेटर इन्जिन दिएको छ ।
यी दुबै मोटरसाइकल यो सेग्मेन्टमा नै उत्कृष्ट मोटरसाइकल हुन् । यामाहा माइलेज र कम्र्फटका कारण चर्चित छ भने आरटीआर पावर र स्मार्ट कनेक्टका कारण चर्चामा रहेको छ । मेरोअटो बाट ।